Aya ndiwo maratidziro atichaita internet muwatchOS 5 | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inofambira mberi kuve mambo wekufamba mumakore mashoma, uye inogona kunyange kutsiva nhare mbozha, kunze kwekukanganiswa kunonzwisisika kwehukuru hwechidzitiro. Isu taigona kuona imwe yeaya mafambiro mberi kuWWDC mune kuratidzwa kweWatchOS 5 iyo ichaburitswa munaGunyana.
Kugona kubvunza webs kunozogoneka muWatchOS 5. Nhasi cIsu tinoziva nzira yekuwana internet kubva kuApple Watch. Zvimwe kana zvichibvira kana zvisina kurongwa kuve neshanduro yeSafari kana imwe webhu bhurawuza pane yedu ruoko. Tichawana kuburikidza newebhukit API iyo yatichava nayo muWatchOS 5.
Chinhu chekutanga chatinofanira kufunga nezvacho kukwana. Kuti utange, Hatisi kuzoona iyo yakazara yewebhu muzviitiko zvakawanda, kana isiri adapta yewebhu, chimwe chinhu chakafanana neshanduro dzewebhu dzeiyo yazvino iPhone.
Chimwe chinogumira kushandisa bhatiri. Apple Watch inoitirwa kukurumidza kuzivisa chiziviso uye nekukurumidza inodzokera kuhope mode. Izvi zvakakosha kuitira kuti bhatiri risvike patiri nehumwe mukana pakupera kwezuva. Kana tikaramba tichikwesha, hupenyu hwebhatiri hunodzikiswa.
Kuti uwane internet, unofanirwa kuita zvinotevera:
Tumira iwe chinongedzo kune webhusaiti iwe yaunoda kushanyira kuburikidza neMessage. Imwe sarudzo ndeye kuve neMessage chinongedzo chinogumira kugoogle.com kana skrini yeimwe injini yekutsvaga yaunosarudza.
Kamwe iyo link yagamuchirwa, tinya pairi. Kuona kudiki kwewebhu iri mubvunzo kuchazaruka. Zvichienderana nemutoro wepeji, Apple inotumira iwe meseji ichiti iyo inokuzivisa iwe kana iro peji rapedza kurodha. Ramba uchifunga kuti kunyangwe paApple Watch Series 3 kubhurawuza muWatchOS 4 kunononoka.
Mushure mekukanda, iwe unogona kupururudza kuburikidza neiyo peji nerubatsiro rwemunwe wako pamusoro pechidzitiro. Ehezve, mavhidhiyo uye zvimwe zvemukati zvinoda zviwanikwa zvihombe, hazviwanikwe.
Iri webhu bhurawuza rinoshandisa iyo Safari Reader-senge nzira chero pazvinogona, kuchengetedza zviwanikwa uye kuzviona zvichipinza paawa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Aya ndiwo maitiro atichafambira neinternet muwatchOS 5
Iyo Unarchiver faira decompression application yakagadziridzwa kune vhezheni 4.0